राष्ट्रपति भनेको लोकतन्त्र भनिने पद्धतिको शिर हो । शिर नै असुरक्षित रहेपछि लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित हुन्छ ? किन बुझ्दैनन् लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर भजन गाउने गाइनेहरू ?
जब जब प्रधानमन्त्रीलाई सकस पर्छ, राष्ट्रपति सक्रिय भइहाल्छिन् । प्रधानमन्त्री एक्लिदै गएपछि उनले संसद नै बिघटन गरिदिए । संविधानमा लेखिएको थिएन, सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । प्रधानमन्त्री नैतिक संकटमा फसे । उनकै दल एमाले र पुरानो भाइचारा भएको माओवादी केन्द्रले सडकबाट उधुम विरोध गरेर भनिरहेको छ– नैतिकता देखाउ, पदबाट राजीनामा देउ । यिनै तत्वहरू आफूले सरकार बनाउन नसकेपछि भन्न थालेका छन्– कांग्रेसजी सरकारको नेतृत्व गरिदेउ । जसपाजी सरकारको नेतृत्व गरिदेउ । जनताले कम्युनिष्टलाई मत दिए, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन देउ भनेर । यिनीहरू ओली फालेर जनमतमाथि गोली हान्दै प्रतिपक्षीहरूलाई पो सत्ता बुझाउन दौडादौड गरिरहेका छन् ।
सक्नेले त आफ्नै पार्टीका र समर्थन पाएका ओलीलाई अल्पमतमा पार्नु र विकल्प संसदीय दलबाटै, संसदबाटै दिनु नि । आफ्नै दलको सरकार फाल्न कम्मर कसेर लाग्ने र विपक्षीलाई सरकार चलाउन दिन माधव र प्रचण्ड गुट लागेको देखिन्छ । यिनीहरू आफैमा दूधले नुहाएका छैनन्, त्यसमाथि जनमतको कदर गर्नसमेत यिनले सकेको देखिदैन । लोकतन्त्रमा लोकमतमाथि खेलवाड ?
र, राष्ट्रपतिले चैत ३ गते सर्वदलीय बैठक बोलाइन् । बंगलादेश जान्छु भन्ने जानकारी दिंदै राजनीतिमा प्रवेश गरिन् । र, भन्छिन्– ‘संविधानको सीमा नाघेको छैन ।’ सरकारले सिफारिस गरेको विषय कार्यान्वयन गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनिन् तर तात्तातै गर्नु भनेर संविधानमा कहाँ लेखेको छ ? सोध्नुपर्ने संसद विघटनजस्तो गम्भीर विषय सल्लाहकार अथवा सर्वोच्चलाई सोध्नुपर्ने काम समेत गरिनन् ।
राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपतिकै निर्णयमाथि प्रश्न उठाइयो । उनले भनिन्– संवाद, सहकार्य र एकता नेपालको राजनीतिक सौन्दर्य हो । दलहरूको सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन आग्रह गरिन् ।
यही वैठकमा प्रचण्डदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बोलेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि संसद बिघटन हुनसक्ने संकेत गर्न भ्याए । सरकार र संसद् चल्ने अवस्था नआएपछि प्रतिनिधिसभा मैले विघटनको निर्णय लिएको थिएँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सवालमा कसैले थप प्रश्न उठाएनन् । रामचन्द्र पौडेलले पनि विरोध जनाए । यो बैठकमा बाबुराम, माधव नेपाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल गएनन् ।
यो सर्वदलीय बैठकलाई सत्ताइतरका नेताहरूले राजनीतिकरण भनेका छन् । यसपछि प्रम ओलीले माधव नेपाल र प्रचण्डसँग वार्ता गर्न चाहे तर राजनीतिमा देखिएको अराजकताको ओखती निस्कन सकेन, राष्ट्रपतिको आलोचनामात्र भयो ।